Guardiola oo warkii ugu xumaa la kulmay kahor kulankooda soo aadan ee Arsenal – Gool FM
Guardiola oo warkii ugu xumaa la kulmay kahor kulankooda soo aadan ee Arsenal
Dajiye February 1, 2019
(Manchester) 01 Feb 2019. Manchester City ayaa isku diyaarineysa kulankooda 25-aad horyaalka Premier League ay kula ciyaari doonaan kooxda Arsenal Axada soo aadan Emirates Stadium.
Sky Blues ayaa kala kulantay guuldarao lama filaan ah kooxda Newcastle United kulankii lasoo dhaafay, kadib markii loogu awood sheegtay 2-1.
Hadaba wargeyska “Telegraph” ee dalka England ayaa wuxuu xaqiijiyay in Pep Guardiola uu wajahayo dhibaato kaloo weyn, kadib guuldaradii Newcastle United, taasoo ah inuu dhaawac soo gaaray goolhaayaha reer Brazil ee Ederson.
Sida laga soo xigtay wargeyska Ingariiska ah, goolhayaha reer Brazil ee Ederson ayaa halis ugu jira inuu ka maqnaado kulanka ay kooxaha Manchester City iyo Arsenal kuwada ciyaari doonaan Premier League Axada soo socota.
Pep Guardiola ayay dhibaato weyn ku noqoneysaa dhaawacan soo gaaray goolhaaye Ederson, maadaama uu sidoo kale dhaawac halis ah kaga maqan yahay goolhaayaha reer Chile ee Claudio Bravo.
RASMI: Peter Crouch oo markale dib ugu soo laabtay ka ciyaarista Premier League...(Kooxdee Ayuu Ku Biiray?)
Yaa yimid yaase ka tagay 6-da koox ee ugu waa wayn Premier League????